March 2018 – Allpuntlander.com
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Somalia oo War-Saxaafadeed soo saaray (Akhriso)
Iyadoo la xusayo Maalinta Caalamiga ee Haweenka, mas’uulka ugu sarreeya Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay guusha ay sannadahan dhow ka gaareen horumarka – gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka. “Haweenka ayaa isku hayay qoysaska Soomaaliyeed intii lagu jiray sannadihii dheeraa ee fowdada iyo colaadda hubaysan ee dalka,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating. Haweenka Soomaaliyeed waxay dhigeen taariikh xilligii hanaankii doorashada ee sannadkii 2016kii, markaaso ay murashaxiinta haweenka ahi ay ku guuleysteen boqolkiiba…
Siyaasiga Nuur Ismaaciil” Heshiiska Dakada Barbara Sameyntiisa ayuu leeyahay “”
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sharci daro ku tilmaamay heshiiskii dekeda Berbera. Biixi ayaa ku tilmaamay Raisul Wasaare Khayre wiil yar oo Xamar ka taliya kaasoo uu sheegay inuu ku dhawaaqay dagaal, ka Maamul ahaana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan. Wuxuu sheegay Madaxweynaha Somaliland in Dowladda Federaalka qaabka ay wax u wado aysan ku qanacsaneyn haddii ay yihiin Somaliland, wuxuuna tilmaamay Dekeda Berbera ay go’aan ka gaari karto Somaliland. “Heshiiska…